Hevitra miresaka | Reef Resilience
Rehefa miresaka amin'ireo mpandray anjara momba ny hoavin'ny haran-dranomasina dia maro ny mpitantana no niatrika fanontaniana sarotra toy ny hoe "Raha maty ny haran-dranomasina, tsy manandrana miaro azy ireo foana ve?" na “Moa ve ny fiovan'ny toetrandro dia hamono ny haran-dranomasina ihany?” Ny olona sasany dia mety hiady hevitra fa ny loharanom-pahalalana amin'izao fotoana izao amin'ny fikarohana sy ny fiarovana ny haran-dranomasina dia tokony haverina alamina mba hiarovana toeram-ponenana hafa. Ny valin'ny fanontaniana "fahaverezana sy fahantrana" dia manasongadina matetika ny ny fiarovana ny vatohara noho ny fahasamihafan'ny fiainana manohana azy sy ny tombontsoa lehibe ananany amin'ny olona amin'ny lafiny fiarovana ny morontsiraka, ny fitsaboana, ny sakafo, ny fivelomana, ary ny fidiram-bola. Zava-dehibe ny mizara ny mpandray anjara amin'ny fikarohana siantifika haingana izay mampiseho ny faharetana sy ny fampivoarana ny haran-dranomasina amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Zava-dehibe foana ny mampita izany fa ny fahalemena dia azo atokisana manokana fitantanana fitantanana.
Inona no lazain'ny manam-pahaizana?
Elizabeth McLeod, Lefitry ny Reef Systems, TNC
"Azo ampiharina amin'ny fomba ofisialy izany hevitra izany (tsy tokony hanelingelina isika satria maty ny vatohara sy ny fiovan'ny toetrandro) mankany amin'ny tontolo iainana rehetra. Araka ny tatitra vao haingana, ref Maro ireo habaka voajanahary maneran-tany no mampiseho ny fiheverana goavana toy ny: ranomamy, ranomandry, siramamy sira, haran-dranomasina, lakana ahitra, ary vatoharan-dranom-bary. Noho izany, maninona? Manelingelina isika satria misy tantara mahomby izay nahatonga ny fihetsika nataon'ny olombelona ho fahasamihafana amin'ny fanarenana ny vatohara. Manahirana ihany koa izahay satria miankina amin'ny vatohara ho an'ny velona ny fiarahamonina maneran-tany. "
Stephanie Wear, mpanolotsaina zokiolona & mpanolotsaina zokiolona, ​​TNC
"Ny zavatra ianarantsika momba ny fihoaran-tsakafo amin'ny mpanjono dia milaza amintsika fa tsy hanipy ny tanantsika amin'ny faharesena. Raha ny marina, ny siansa vao haingana momba ny vatohara dia nanambara ny fahasarotam-piainana vaovao - indrindra fa ny fiovaovana goavana ho setrin'ny sasany amin'ireo orinasa miady amin'ny rivodoza izay tena atahorana indrindra isika toy ny ranomasina sy ny fiovan'ny ranomasina. Ohatra, ao amin'ny 2007, McClanahan et al. ref dia nahatsikaritra fa ireo populations izay niaina ny fihenan'ny hafanam-po teo aloha dia azo inoana kokoa fa tsy manelingelina ny adin'ny hafanan'ny tosi-drà. Izany fiovan-toetra izany dia nanamarina ireo mpahay siansa momba ny fiarovana amin'ny fanadihadiana ny valin'ny fahanginana amin'ny hetsika fanenomana 2010 izay nitranga tany Azia atsimo atsinanana. Tamin'ity taona ity, tao anaty taratasy iray Current Biology, Hughes et al. ref dia mampiseho fa ny fiovan'ny toetry ny ranomasina dia mety hitarika ny famerenana karazana fa tsy fanariam-pako lehibe ho an'ny tontolo iainana manontolo. "
Stephanie Wear misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCoral Reefs: Ny maty velona na ny fivarotan-jaza?
Ove Hoegh-Goldberg, Talen'ny Global Change Institute sy Profesora amin'ny Siansa an-dranomasina, University of Queensland, Aostralia
"TSY mahomby ny fanoloana vatohara amin'ny rafitra enjeniera. Rehefa ampitahainao ny fandaniana amin'ny famerenana mivantana (famerenana mavitrika) ny voka-bolana voavolavola natao tamin'ny Great Barrier Reef amin'ny vidin'ny fihazonana ny fiovaovan'ny toetr'andro mankany amin'ny 2 ° C sy CO2 ho an'ny 450 ppm araka ny tombana azo avy amin'ny fanombanana 2007 IPCC 4th Assessment Report. Ny sanda roa dia azo oharina. indray ny harambato Great Barrier dia mety hilefitra amin'ny fiatrehana ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny ankapobeny. "
Ove Hoegh-Goldberg ICRS 2012 Fampisehoana Plenary
Zava-dehibe ho an'ny fanontaniana iraisana
Moa ve tsy ny fiovaovan'ny toetr'andro ihany no hahafaty ny vatohara?
Raha ny marina, ny vatoharan-dranomasina dia mahatsapa ny fiovan'ny hafanana sy ny pH, ary ny fiovaovan'ny toetrandro dia mampiakatra ny mari-pahaizana momba ny ranomasina ary manamboatra ranomasimbe kokoa ny ranomasina. Kanefa, karazan-karazan-javamaniry maro no afaka miatrika ireo fiovana ireo.
Ny Corals eran-tany dia miaina anaty tontolo manodidina. Ohatra, ao Samoa Amerikanina, ny vatohara dia miroborobo ny hafanana eo anelanelan'ny 92-93 ° F, izay heverina ho mafana loatra ho an'ny vatohara.
Ny Corals dia mampiseho faharetana mahavariana amin'ny alàlan'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fiovan'ny ranomasina, manome ny fanantenana ny fivelarany tsy tapaka.
Ny fiovaovan'ny toetrandro dia tsy hanjavona ny haran-dranomasina, na izany aza, ny fiovaovana sy ny fizarana ny haran-dranomasina dia hiova. Hisy ny mpandresy sy ny tsy fahavitrihana, ka miteraka vondrom-piarahamonina misy vatohara izay mety tsy mitovy amin'ny ankehitriny.
Nahoana isika no tokony hiaro ny haran-dranomasina?
Manana karazan'olona maro samihafa ny tontolo iainana manerantany. Izy ireo dia manan-danja amin'ny fialantsasatra, fisaka, fizahan-tany, fiarovana ny moron-dranomasina, ary ny fiterahana izay tena manan-danja amin'ny fampivoarana medikaly vaovao.
Farafahakeliny olona 1 lavitrisa maneran-tany no mandray soa avy amin'ny haran-dranomasina mivantana; Efa ho arivo tapitrisa tapitrisa tapitrisa ny proteinina amin'ny trondro haran-dranomasina, raha iray tapitrisa kosa ny olona miankina amin'ny vatohara ho an'ny fivelomany. ref
Ny vatoharan-dranomasina dia trano fonenan'ny 25% amin'ny fiainana an-dranomasina an'arivony manerana an'izao tontolo izao, na dia ny vatohara aza dia tsy ahitana afa-tsy 1 / 10th amin'ny 1% amin'ny tontolo iainana an-dranomasina.
Araka ny tombatombana, ny haran-dranomasina dia manome entana ara-bola sy tolotra ara-tontolo iainana mendrika ny $ 375 miliara isan-taona ho an'ny olona an-tapitrisany. ref
Ny fanadihadiana dia mampiseho fa amin'ny antsalany, ireo firenena manana orinasa mpitrandraka haran-dranomasina dia mamokatra mihoatra ny antsasaky ny vokatra avy aminy avy amin'ny firenena. Ohatra tsara dia tsara any Bonaire, nosy kely any Karaiba. Bonaire dia miantoka $ 23 tapitrisa dolara isan-taona avy amin'ny hala-bato momba ny haran-dranomasina, kanefa ny fitantanana ny valan-javaboary an-dranomasina dia latsaky ny $ 1 tapitrisa isan-taona. ref
Mihoatra noho ny firenena 100 manerana izao tontolo izao ny tombontsoa avy amin'ny fizahantany ho an'ny haran-dranomasina. ref
Ho an'ireo olona mipetraka any amin'ny faritra akaikin'ny haran-dranomasina, ny vatoharan-dranomasina dia ampahany manan-danja eo amin'ny fiainany. Ny vatohara dia mifandray mivantana amin'ny soatoavina nentim-paharazana, ara-panahy ary ara-kolontsaina.
Ny vatohara dia toy ny buffer, miaro ny faritra eny amoron-dranomasina. Raha tsy misy vatoharan-dranomasina, maro amin'ireo tora-pasika sy tranobe maro no ho lasa mora kokoa amin'ny fanetsehana ny hetsika sy ny faharavan'ny oram-baratra.
Ny vatoharan-dranomasina dia mamonjy aina. Be dia be ny zava-mahadomelina manan-danja efa nipoitra avy amin'ny zavatra simika hita any amin'ny vatan'ny vatohara ho an'ny vatohara, anisan'izany ny fitsaboana aretim-panafem-pandrefesana, fery, leokemia ary kanseran'ny hoditra.
Ny fikambanako dia miankina amin'ny sakafo avy amin'ny vatohara. Nahoana isika no tokony hanahy momba ny hoavin'ny fahasalaman'ny vatantsika rehefa mila trondro mba hihinana isika ankehitriny?
Ny vatoharan-dranomasina dia manome loharano sakafo sy fialofana ho an'ny karazan-trondro maro, anisan'izany trondro tanora.
Ny Corals dia ampahany manan-danja amin'ny vatohara; Izy ireo no karazam-borona izay manome sehatr'asa momba ny haran-dranomasina, ny tranon'ireo karazan-trondro izay manohana ny vondrom-piarahamonina. Mba hiantohana ny fambolena voajanahary tsara ankehitriny sy amin'ny hoavy dia zava-dehibe ny miaro ny tranony sy ny zaridaina.
Ny vatoharan-dranomasina dia ahitana karazan-trondro 4,000 ary koa ireo biby tsy azo tsiron-tsakafo hafa ary manome lanja ny ampahatelon'ny isan'ny mpitrandraka marobe any amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana.
Ny vatoharan-dranomasina dia maty noho ny fiovan'ny toetrandro avy amin'ireo firenena mandroso. Inona no azontsika atao, tahaka ireo mpitantsoratry ny haran-dranomasina, izay hitondra fiovana eo anatrehan'ny fiovan'ny toetr'andro?
Amin'ny fampifandraisana ireo atidoha eo an-toerana amin'ny vatohara ho an'ny vatohara sy ny fananganana ny faharetana amin'ny famolavolana ny MPA sy ny hetsika fitantanana, ny manampahefana dia afaka manao zavatra mba hampihenana ny fahasimbana atrehana amin'ny fiantraika mifandraika amin'ny toetrandro.
Ny fiarovana ny haran-dranomasina ho an'ny haran-dranomasina no loharano voalohany amin'ny fiarovana amin'ny fanelingelenana lehibe na madinika. Ny vatany izay efa voan'ny tsindry dia miteraka fihenana bebe kokoa rehefa miatrika toe-javatra mampihenjana fanampiny, toy ny toetry ny ranomasina ambony. Noho izany, raha miatrika safidy voafetra ny mpitantana amin'ny dingana arahina amin'ny fiakaran'ny hafanan'ny ranomasina, dia hampihena ny laharam-pahamehana rehetra ny loza hafa.
Ny fanamafisana ny fanamafisana izay mety manimba ny fari-piainan'ny vatam-piaramanidina (ohatrinona ny fanimbana, ny loto, ny fako sy ny fambolena ary ny fanorenana an-tanàn-dehibe, ny fantson-drano ary ny ala, sns.) Dia hanome vahaolana bebe kokoa ho an'ny vondrom-piarahamonina ho tafavoaka velona amin'ny fanelingelenana na fanelingelenana lehibe hafa.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCommunican Resilience - fampisehoana an-tsoratramanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampidirana Generic Resilience - fampisehoana izay manolotra fitantanana mifototra amin'ny faharetana, ao anaty rakitra PowerPoint izay azo ampifanarahana amin'ny sary sy ny vaovao eo an-toerana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampidirana ohatra momba ny faharetana - santionany misy fanolorana fanolorana «Fampidirana ny fiaretana»manokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy lahatsary Coralax